Steel Truss kwedesika Ukwakha
I-truss yensimbi ene-rebar yensimbi njengesixhobo esingaphezulu, isitshixo esisezantsi kunye nelungu lewebhu kwaye iqhagamshelwe yindawo yokumelana nendawo ekuthiwa yi-welding rebar truss. Le ipleyiti kuthwala ipleyiti, apho itrasi yentsimbi kunye nembasa esezantsi zidityaniswe zizonke ngokuxhathisa indawo yokuwelda, ibizwa ngokuba ngumgangatho wesixhobo sentsimbi.
Sheet welding Steel mesh Sheet
I-welding sheet ye-rebar sheet yiphepha elinemigca apho ukuqiniswa kwe-longitudinal kunye nokuqiniswa okunqamlezileyo kulungelelaniswe kumgama othile nakwii-angles ezilungileyo komnye nomnye, kwaye yonke indlela enqamlezileyo idityaniswe kunye.
Kuya kufuneka yenziwe nge-CRB550 ebandayo eqengqelekileyo yentsimbi yentsimbi okanye i-HRB400 kwibakala elishushu eliqengqelwe ngentsimbi, okanye i-CPB550 yebanga ebandayo etsalwe ngetsimbi egudileyo.
Isefu yentsimbi kwalenza Australia
Umnxeba wentsimbi yentsimbi ligama eliqhelekileyo lezinto ezilukiweyo okanye ezidityaniswe ngocingo olusezantsi lwekhabhoni, ucingo lwentsimbi oluphakathi, intsimbi ephezulu yentsimbi kunye nocingo lwentsimbi. Iinkqubo zemveliso zezi: ukuluka okuqhelekileyo, ukuloba nge-embossing kunye ne-welding yamabala. Ucingo lwentsimbi lusetyenziswa ikakhulu njengezinto ezingasetyenziswanga kwaye zilungiswa zenziwe umnatha ngezixhobo zobungcali, ke ibizwa ngokuba yintsimbi.
Ulwakhiwo Steel Iintetho Nge eqine High
Izinto ezibizwa ngokuba zezizinto zentsimbi zidityaniswe zonke ngokudibanisa i-welding, i-riveting okanye i-bolting, njl.njl. Ukuveliswa kwemveliso, ukufakwa ngokukhawuleza, ixesha elifutshane lokwakha, ukusebenza kakuhle kwenyikima, ukubuyisela imali ngokukhawuleza kunye nongcoliseko olungephi kwindalo
I-0.5mm emnyama efakwe kwi-crca coil yentsimbi
I-CRCA Ingqele emnyama eqengqelweyo emnyama yinkqubo yokuvelisa i-coil yentsimbi. Ukuba coil eqengqelekileyo yentsimbi ifudunyezwe ukufudumeza ubushushu, umbala ongaphezulu ujike umnyama ngenxa yeqondo lobushushu eliphezulu lokunxibelelana nomoya, ke oko kubizwa ngokuba yikhoyili yentsimbi ebunjiweyo ebandayo emnyama. Umphezulu wayo awukhazimlwanga, ke umnyama. Umphezulu omnyama awukhanyi kangako. Imnyama kancinci, kodwa ithe nkqo ngaphezulu kumphezulu, kwaye isetyenziswa kwezinye iindawo apho iimfuno zingangqongqo kakhulu.
Iphepha le-DC01 CRC elibandayo
Ingqele yentsimbi eqengqelekileyo yentsimbi yenziwe ngeentsimbi ezishushu eziqengqelekileyo zentsimbi eziqengqelekileyo kubushushu begumbi nangaphantsi kobushushu bokusetyenziswa kwakhona. Oku ikakhulu isebenzisa grade carbon-carbon sentsimbi, efuna ukugoba elungileyo abandayo kunye nokusebenza welding kunye nokusebenza ezithile bexhentsa.
2.Grade: DC01, DC02, DC03, DC04, njl.
Ubunzima be-4: 0.12-4.0mm
5.Length: ngokwemfuneko yoMthengi
ST12 CRC abandayo liqengqiwe ngentsimbi
Umtya ojijekileyo obandayo wentsimbi wenziwe ngee coil ezishushu ezisongwe kubushushu bamagumbi nangaphantsi kweqondo lobushushu kwakhona, kubandakanya amashiti kunye neekhoyili, ezinokuveliswa zizinto ezininzi zokugaya zentsimbi zasekhaya ezinje ngeBaosteel, i-Wuhan Iron kunye ne-Steel Co, Ltd. Phakathi kwazo, ukuhanjiswa kwimakhishithi ibizwa ngokuba yishiti yentsimbi, ekwabizwa ngokuba yibhokisi okanye iphepha elisicaba; Ubude obude, obuziswa ngekhoyili, bubizwa ngokuba ngumcu wentsimbi, okwabizwa ngokuba lishiti elidibeneyo. Ubunzima bomtya obandayo obandayo ngokubanzi yi-0.1 ~ 3.0 mm kwaye ububanzi buyi-100 ~ 1250 mm; Isebenzisa umtya oshushu oqengqelekileyo okanye iphepha lesinyithi njengezinto ezingafunekiyo kwaye ziqengqeleka kwiimveliso ngokugaya okubandayo kubushushu obuqhelekileyo.
Ingqele yentsimbi eqengqelekileyo ineepropathi ezilungileyo, oko kukuthi, ngokuqengqeleka okubandayo, umtya obandayo oqingqiweyo wentsimbi enobunzima obucekeceke kunye nokuchaneka okuphezulu kunokufumaneka, ngokuthamba okuphezulu, ukugqiba komphezulu ophezulu, indawo ecocekileyo nebengezelayo yomtya wentsimbi obandayo. ukuqhubekekiswa, iintlobo ezininzi kunye nokusetyenziswa okubanzi, kwaye kwangaxeshanye, ineempawu zokusebenza kokunyathela okuphezulu, akukho ukuguga kunye nenqanaba lesivuno esiphantsi